ဆောင်းပါး > ဘုရားသခင်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံများ > စကားများအာဏာရှိသည်
သူပုန်းအောင်းရန်နေရာတစ်ခုကိုအလွန်အမင်းရှာဖွေနေစဉ်နောက်ဆုံးတွင်သူသည်လူစည်ကားသောပြဇာတ်ရုံထဲသို့ထိုးကျသွားပြီးထိုနေရာတွင်နေရာတစ်ခုရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်မကြာခင်မှာပဲသူကပြဇာတ်ရုံထဲကို ၀ င်ရောက်သွားတဲ့အကျဉ်းသားလေးယောက်ငါးယောက်ဟာထွက်ပေါက်ကိုပိတ်ဆို့ထားတာကိုသတိပြုမိလာတယ်။ သူ၏အကြံအစည်ပြိုင်ကားခဲ့ကြသည်။ သူဘာလုပ်နိုင်မှာလဲ။ အခြားလမ်းမရှိသောကြောင့် theater ည့်သည်များပြဇာတ်ရုံမှထွက်ခွာလျှင်အလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်ကြောင်းသူသိသည်။ ရုတ်တရက်သူ့ကိုစိတ်ကူးတစ်ခုရောက်လာသည်။ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြန့်ပြန့်ပြဇာတ်ရုံထဲမှာခုန်တက်ပြီး“ မီး! မီး မီး! လူအုပ်သည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လျက်ထွက်ပေါက်သို့အလျင်အမြန်သွားကြသည်။ သူရဲကောင်းသည်ထိုအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးလူစုလူဝေးများနှင့်ရောနှောကာအစောင့်များဖြတ်ကျော်သွားပြီးညတွင်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်ဒီမြင်ကွင်းကိုငါမှတ်မိတယ် - စကားလုံးတွေကအားရှိတယ်။ ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာလူတော်တော်များများဟာကြောက်လန့်တကြားဖြစ်သွားပြီးသူတို့ဘဝအတွက်ပြေးထွက်လာခဲ့ကြတယ်။
Aber das Wort Gottes vollbringt nicht nur Dinge, es verwandelt uns auch. Die Bibel wurde nicht zu unserer Information, sondern zu unserer Transformation geschrieben. Nachrichtenartikel können uns informieren. Romane können uns inspirieren. Gedichte können uns entzücken. Aber nur das potente Wort Gottes kann uns transformieren. Einmal empfangen, fängt das Wort Gottes in uns zu wirken an, und wird zu einer lebendigen Kraft in unserem Leben. Unser Verhalten beginnt sich zu ändern und wir bringen Frucht (2. တိမောသေ 3,15-17; 1. ဓာတ်ဆီ 2,2). Eine solche Macht hat das Wort Gottes.
Überrascht uns das? Nicht, wenn wir im 2. တိမောသေ 3,16 lesen: «Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben», («Gott-gehaucht» das ist die exakte Übersetzung des Griechischen). Diese Worte sind nicht bloss menschliche Worte. Sie sind göttlichen Ursprungs. Es sind die Worte von demselben Gott, der das Universum schuf und alle Dinge durch sein kräftiges Wort erhält (Hebräer 11,3; 1,3). Aber er lässt uns nicht mit seinem Wort allein, während er losgeht und etwas anderes tut. Sein Wort ist lebendig!
ဒါကြောင့်သမ္မာကျမ်းစာကိုဖတ်ရရုံနဲ့မသင့်တော်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းလုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်လို့ပဲ။ သူတို့ကိုနည်းလမ်းဖြင့်မဖတ်ပါနှင့်။ စာမဖတ်ပါနှင့်၊ သူတို့က၎င်းသည်ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်သောကြောင့်။ သမ္မာကျမ်းစာကိုဘုရားသခင့်နှုတ်မြွက်စကားတော်အဖြစ်ရှုမြင်ပါ၊ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်သူဟာစကားပြောနေတုန်းပဲ။ ယင်း၏သြဇာညောင်းသည့်နှုတ်ကပါဌ်တော်ရရှိရန်အသီးများသီးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးကိုမည်သို့အဘယ်သို့ပြင်ဆင်နိုင်သနည်း။
အကျင့်ဟောင်းများကို“ ပေါက်ကွဲစေ” နိုင်ခြင်း၊ မှားယွင်းသောယုံကြည်မှုများကိုချိုးဖျက်ခြင်း၊ ဆည်းကပ်မြှုပ်နှံခြင်းအသစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များကိုကုစားနိုင်ရန်လုံလောက်သောစွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှတ်နိုင်သည့်စွမ်းအားတစ်ခု၊ သမ္မာကျမ်းစာကိုပြောင်းလဲရန်ခိုင်မာသောအကြောင်းရင်းမဟုတ်လော။